Famorana - Raby Michael Avraham
Responsa > Sokajy: Filozofia > Ny famorana
zanak'i Nanontany 4 taona lasa izay
Ahoana ny hevitrao momba ny fanoherana ny famorana? Ny zaza dia olona iray izay tokony hanana safidy na hanao hetsika tsy azo ivalozana amin'ny vatany na tsia, fa ny fiarahana dia mampidi-doza ny zaza ary amin'ny ankapobeny dia toy ny manapaka ny nono ho an'ny zazavavy (momba ny adihevitra momba ny fahasalamana)
Ny adihevitra toy izany dia mety hanohitra ny fahazarana misakafo, ny fanabeazana sy ny toy izany. Tsy misy afa-miala amin’ny fitaoman’ny ray aman-dreny eo amin’ny fiainan’ny zaza. Ka na dia marina ara-teorika aza ilay filazana dia tsy azo ampiharina. Ny ray aman-dreny dia tokony hanao izay fara heriny araka ny finoany azy. Indrindra indrindra, rehefa lehibe izy, ny fanapahan-kevitra hanao alliance dia handratra azy sy hanasarotra azy.
zanak'i Namaly 4 taona lasa izay
Saingy dingana tsy azo ivalozana mifanohitra amin'ny fahazarana ara-tsakafo sy fanabeazana
mikyab123 Namaly 4 taona lasa izay
Tsy marina. Tsy azo ovaina ny zava-drehetra. Ohatra, ny fanabeazana dia mitondra azy any amin'ny toerana iray izay misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra raha hiova lalana.
Dr. Namaly 4 taona lasa izay
Amin'ny fanabeazana dia azo lazaina fa azo averina izy io fa ny sakafo tsy azo averina.
Daniela Namaly 4 taona lasa izay
Fanapahan-kevitra tsy azo ivalozana koa ny tsy famorana 8 andro. Tsy misy afaka mamerina an'io zaza io ny andro fahazazany tany ivelan'ny firaisankina.
A Namaly 4 taona lasa izay
Nahoana no io ihany no olana misy amin'ny fandosiran'ny raby mankany amin'ny vatan'ny raharaha dia malemy ary tsy matotra ny valiny. Somary mampahatsiahy ny fialan-tsiny ultra-Orthodox amin'izao androntsika izao.
ד Namaly 4 taona lasa izay
A, tena. Mariho anefa fa nanoratra izy hoe "na dia marina aza ny teoria" dia avy eo nilaza fa tsy misy safidy hafa ary tsy azo ovaina ny zava-drehetra, sns. Fa ny tena valiny dia ny didin'ny famorana mihoatra ny lanjan'ny fahaleovantenan'ny zaza tsy manan-tsaina.
R. Namaly 4 taona lasa izay
Raha ny hevitro dia tena matanjaka sy marina ny valiny fa tsy mitsoaka.
hazo kesika Namaly 3 taona lasa izay
Ny tohin'ity lohahevitra ity dia nieritreritra aho fa hanampy fa misy olana eto eo amin'ny lanjan'ny fahaleovantenan'ny olona amin'ny zanany sy ny halehiben'ny fahavoazana ho an'ny zaza. Raha ratra lehibe tokoa izany (toy ny fanapahana tongotra na tanana) dia mety hisy ny fampiasana fanerena mba hisorohana izany fanao izany ataon'ireo izay tsy mino izany (toy ny fanerena ny olona iray tsy hamono tena na dia efa nanao izany aza izy. fizakan-tena amin'ny vatany). Raha ny amin’ny famorana anefa dia kely ihany ny fahavoazana ary toa mihoa-pampana noho izany ny sandan’ny fahaleovantenan’ny ray aman-dreny (tahaka ny tsy terena hifoka sigara ny olona iray na dia manimba tena aza). Koa na dia ireo izay tsy mino ny maha zava-dehibe ny famorana aza dia tsy tokony hanaisotra izany amin’izay mino izany. Amin’ny ankapobeny dia azo ampianarina am-pilaminana ny olona manoloana ny fomba amam-panao “barbariana”.